Tantalum Nitride waa muraayad madow oo laba geesle ah oo leh qaaciddada maadada ee TaN iyo miisaanka molikiyuulka ee 194.95
Cufnaanta qaraabada 13.4, barta dhalaalaysaa waa 3090 ℃, microhardness waa 1100 kg / ahayd, kuleylka kuleylka waa 9.54 W / (m, K), adkeysiga 128 mu Ω · cm.
Kaalshiyamka nitride, caanaha kiimikada Ca3N2, CAS: 12013-82-0, cufnaanta: 2.670 g / cm3, muuqaalka: crystal crystal brown
Cufka miisaanka: 148.25 g · mol-1, barta dhalaalaysa: 1195 ℃, milanka biyaha: harolysis. Kaalshiyamka nitride aad ayuu u firfircoon yahay oo wuu burburaa marka uu hawada ku jiro.
U diyaargarowga adkaanta sare, kuleylka kuleylka sare, daxalka, adkeysiga, xirnaanta iska caabinta iyo heerkulka sare ee walxaha kale ee nitriasku waa wax soo kordhiye wax lagu daro birta dhalaalaysa. Diyaarinta qalabka dhoobada gaarka ah. Soo-saaridda wakiilo xumbada xumbada leh oo khaas ah oo loo adeegsaday soosaarida dhalo gaar ah Soo celinta qashinka nukliyeerka. Galiyeyaasha iskudhiska dheemanka synthetic iyo catalysmaterials ee nitride cubic boron
loo isticmaalay soo saarida mashiinka kululeeyaha kulul, nadiifinta aluminium ， bismuth, cadmium, lead, qasac iyo weelasha aashitada lagu keydiyo. Nano qalab adag oo isku dhafan carbide sifeeye heerkulka sare qalabka dhoobada dhoobada, qalabka kuleylka u adkaysta xirmada u adkaysta, jajabinta xoojinta jajabka, inta badan loo isticmaalo qalabka, qalabka dhismaha, qalabka fayadhowrka iyo qaybaha kale ee birta maalin kasta oo ka sarreeya jihada dalabka.
Iyada oo leh heerkul sarreeya, caabbinta daxalka, xirashada iska caabinta, thermalshock, cufnaanta hoose iyo adkaanta sare ee waxqabadka muuqda ee qalabka cusub, oo inta badan loo isticmaalo heerkulka sare, qiiqa iyo duulista hawada iyo aagagga kale
loo isticmaalay sida walxaha tabinta budada iyo walxaha qurxinta ee sida balaaran loogu isticmaalo heerkulka sare. xirtaan iyo aerospace iyo beeraha kale. Maaddadu waxay leedahay habsami u socod wanaagsan, waxay noqon kartaa koronto electrolysis milix la shubay ah iyo xiriiro koronto iyo waxyaabo kale oo la adeegsado. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sida tine dhoobada dhoobada ceyriinka ah, walxaha wax lagu dhaqmo